Bogga ugu weyn Warar Naxdin Leh 'Crazy Samurai' wuxuu leeyahay 77-Min Dunida ugu horeysa. Isku-xigxiga Filim Hal-Qaad ah
Halyeeyga fanka dagaalka Japan Tak Takaguchi (oo ay kasoo horjeeddo, Kaca Gabadha Mashiinka) wuxuu helayaa biilasha ugu badan filimka Samurai Crazy: 400 iyo 1. Muuqaalka kore ayaa ka hooseeya. Filimkan ayaa lagu wadaa inuu ka soo muuqdo filimka faneed ee dagaalka HI-YAH! on February 12, 2021, wax yar uun ka hor ay Digital, Blu-ray, iyo DVD dhibic on March 2 ka Well Go USA madadaalo.
Sida lagu sheegay war-saxaafadeedka:
Muhiimadda filimkan aan caadiga ahayn waa tallaabo isku xigxig ah oo 77-daqiiqo ah oo lagu qaaday hal tallaabo oo isdaba-joog ah, 'dagaal maratoon ah oo] ay ku loolamayaan waligiis filim' (Forbes). Agaasime Yuji Shimomura (Dhimashada Dhimashada, Re: Dhashay) wuxuu sameeyay farshaxan heer sare ah oo ku saabsan waxqabadka choreography agagaarka Sakaguchi, oo ciyaara aktarka ugu halista badan seefta dagaalka ee Japan-Miyamoto Musashi (1584-1645), oo ah dagaalyahan aan laga adkaan ugu yaraan 60 duelis diiwaangashan — asagoo qaadanaya dagaalkii ugu adkaa.
Well Go USA madadaalo
Waa tan halkaan hoose ee loogu talagalay Samurai Crazy: 400 iyo 1:
Markuu sayid samurai yimaaddo si uu ula dagaallamo Yoshioka dojo, wuxuu u galaa gaadmo. Filim layaableh oo hal-qaad ah, Miyamoto Musashi (Tak Sakaguchi) wuxuu u halgamayaa noloshiisa 400 dagaalyahanno, isagoo boos ka helay taariikhda Waali Samurai Musashi.
WAALAN SAMURAI: 400 iyo 1 waxay leedahay waqti-socod qiyaastii ah 92 daqiiqo oo aan la qiimeynin.
Dana DeLorenzo iyo Ray Santiago Codkooda Astaamahooda 'Xun xun: Ciyaarta'